राजधानीका स्कुले बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम, कसरी जोगाउने ??? | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
राजधानीका स्कुले बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम, कसरी जोगाउने ???
धेरै कामकाजी अभिभावकलाई जस्तै कामको व्यस्तताका कारण तपाईंले पनि बालबालिकालाई केयरहोम तथा मन्टेश्वरीमा छाड्नुपर्ने बाध्यता होला । स्कुलमा सबैभन्दा बढी समय बिताउने बालबालिकाको पोषणबारे कहिल्यै ख्याल गर्नुभएको छ ? यदि छैन भने अब विशेष ख्याल गर्नुहोला, स्कुले बालबालिकालाई कुपोषणको खतरा बढ्दो छ।
तीनदेखि ६ वर्षको उमेरका बालबालिकाको यथोचित शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिका लागि पोषण अत्यावश्यक छ । यो उमेरमा उनीहरुलाई प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड र भिटामिनयुक्त खानेकुरा खुवाउनुपर्छ । उमेर अनुसार बालबालिकाले खानेकुरा खाएका छन् कि छैनन्, त्यसमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खानेकुराको सन्तुलन नमिलेमा बच्चामा कुपोषणको समस्या हुन्छ । यो उमेरमा जंकफुड निषेध नै गर्नुपर्छ । तर, सहरिया बालबालिकाहरुले बढी जंकफुड सेवन गर्दा उनीहरुमा कुपोषण बढ्दो छ।
काठमाडौं उपत्यकाका करिब २ हजार बालबालिकामा अध्ययन गर्दा ४५ दशमलब ५७ प्रतिशत बालकहरुको उँचाइको वृद्धि उमेरको अनुपातमा भएको पाइएन । यस्तै, ५२ दशमलब ४६ प्रतिशत बालकको उमेरको अनुपातमा तौल कम थियो । ४३ दशमलब ४२ प्रतिशत बालिकाहरुको उँचाइ उमेरको अनुपात अनुसार बढेको पाइएन भने ४६ दशमलब ९ प्रतिशत बालिकाहरुको तौल उमेरको अनुपात अनुसार थिएन । पोषणको कमी हुँदा उमेरको अनुपात अनुसार उँचाइ र तौलको वृद्धि हुँदैन।
उमेरसमूह अनुसार कति हुनुपर्छ उँचाइ र तौलको अनुपात ?
स्कुले बालबालिकामा कुपोषण हुन नदिन के गर्ने?
कुपोषण हुने मुख्य कारण खानपान हो । पछिल्लो समय प्राय: बालबालिकाले स्कुलमै खाना खान्छन् । उनीहरुलाई दिने खानाको गुणस्तरको अनुगमन अभिभावकले गर्नुपर्छ । स्कुलमा जंकफुड पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध गरिनुपर्छ।
जंकफुडले पेट अघाए पनि पोषण पुग्दैन । धेरै जंकफुड खाँदा आन्द्रा सुक्ने समस्या हुन्छ भने त्यस्ता खानेकुराले बालबालिकाको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा समेत ह्रास आउँछ । जसले गर्दा बालबालिकालाई ज्वरो आइरहने, झाडापखाला लागिरहने समस्या देखिन्छ । अभिभावकले घरमा उनीहरुलाई हरियो सागपात, गेडागुडी, माछामासु, रोटी-तरकारी जस्ता खानेकुरा नियमित खुवाउनुपर्छ । यस्ता खानेकुराले बालबालिकालाई आवश्यक पोषण दिन्छ।
बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन नियमित स्वास्थ्य परीक्षण समेत अत्यावश्यक छ । स्कुलमै क्लिनिक स्थापना गरी उनीहरुको आवधिक रुपमा उँचाइ र तौल परीक्षण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बालबालिकाको उचित वृद्धि भए-नभएको थाहा हुन्छ।
बालबालिकाको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी तालिम शिक्षक-शिक्षिकालाई तथा अभिभावकलाई दिँदा कुपोषणको समस्याबाट बचाउन सकिन्छ । तौल र उचार्इको अनुपात गडबड भएमा चिकित्सककहाँ लैजाने अवसर पाउँछन् र चिकित्सकको सल्लाहमा आवश्यक पोषण खुवाउन पाउँछन् । यसले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक अवस्थाको उचित वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउँछ।
यस्तै, स्कुलमै खोप कार्यक्रम सञ्चालन र जुकाको औषधि समय-समयमा खुवाउँदा बालबालिका रोगी हुने सम्भावना हुँदैन । यसले उनीहरुलाई तन्दुरुस्त बनाउन मद्दत गर्छ । स्कुलमा बालबालिकाले राम्रोसँग खाए-नखाएकोबारे शिक्षकहरुले निगरानी राख्नुपर्छ । खानपानमा समस्या देखिए अभिभावकहरुलाई तुरुन्तै सूचित गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको सल्लाह दिँदा समेत कुपोषणबाट बालबालिकालाई जोगाउन सकिन्छ।
बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन स्कुलमा हुनुपर्ने काम
– रक्त परीक्षण
– तौल र उँचाइको नियमित नाप
– उमेर अनुसार तौल र उँचाइको अनुपात परीक्षण
– आवश्यक पोषण तत्वको पहिचान
– पोषण सम्बन्धी योजना तय
– फ्लुको मासिक परीक्षण
– बालबालिकामा देखापरेका स्वास्थ्य समस्याबारे अभिभावकलाई सुझाव।
युनिसेफको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, विश्वभर पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ । कुपोषणकै कारण वार्षिक ३० लाख बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । साढे २ वर्षदेखि तीन वर्षसम्मको उमेरका बालबालिकालाई पोषणको कमी भए उनीहरुको उचित शारीरिक र मानसिक वृद्धि हुँदैन । जसले गर्दा उनीहरुको सिकाइमा समेत असर पुग्छ।
यो अवधि बाहेकमा पनि पौष्टिकताको ख्याल अत्यावश्यक छ । विद्यालय प्रशासनले स्कुलमा र अभिभावकले घरमा ख्याल नपुर्‍याउँदा नेपालमा पनि कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको छ । जनगणनाको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पोषणको कमीले देशभरका बालबालिकामध्ये ३६ प्रतिशतमा उमेरको अनुपातमा उचार्इ पाइएन । यस्तै, १० प्रतिशत बालबालिका दुब्लो र २७ प्रतिशत बालबालिकामा कम तौलको समस्या देखा पर्‍यो।
खानपानमा ध्यान र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने हो भने बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन सकिन्छ । त्यसैले अभिभावकले घरमा खानपिनमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भने शिक्षक-शिक्षिकाले स्कुलमा विद्यार्थीको विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ।
(बालस्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान गरेकी सुवेदीले चाइल्ड हेल्थ नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्।) – स्वास्थ्यखबरबाट
बिरामीलाई खेर जाने फलफूलको सट्टा आर्थिक सहयोग गर्ने यो नौलो तरिका…
पाठक पत्रः महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका र उच्च रक्तचाप !!!
बिरामीका आफन्तलाई मृत्यु कुर्नुको विकल्प छैन भन्नु पर्दा झरेको आँशु…
किशोर थापा भन्छन् – अब म संसदको चुनाव लड्दिन… (भिडियो)